Gini mere eTN ji sonye na Caribbean Tourism Organisation n'izu a?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Gini mere eTN ji sonye na Caribbean Tourism Organisation n'izu a?
Inweta njem nleta • Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Taa, eTN Corporation sonyeere ụlọ ọrụ mmepe njem, ndị Caribbean Tourism Organisation (CTO), dịka onye otu.
eTN Corporation, onye nwe ya eTurboNews nabatara ndị Caribbean na-eme njem nleta (CTO) dị ka onye otu n'izu a.
The Ismtù Njem Caribbean Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Caribbean bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe njem yana ndị Dutch 24, Bekee, Spanish, na ndị France na ọtụtụ ndị otu jikọrọ ọnụ. Ọhụụ CTO bụ ịkwado ya Caribbean dị ka ihe kachasị achọsi ike, afọ niile, njem ihu igwe ọkụ maka ezumike. Ebumnuche ya na-eduzi echiche nke Leading Sustainable Tourism. CTO dabere na Barbados nwere ọfịs na New York na London.
eTN Corporation nwere eTurboNews na mgbakwunye na ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ na-erute ndị ọkachamara na-eme njem, ndị ahịa, na ụlọ ọrụ mgbasa ozi gburugburu ụwa. Na mgbakwunye na eTurboNews.com, eTurboNews.e enwere ọzọ (Travellọ Ọrụ Njem )wa), eturbonews.de (Mbipụta asụsụ German), Forimmediaterelease.net (ọrụ waya maka ndị nta akụkọ), njemindustrydeals.com (maka ndị ọrụ njegharị), nzukọ (nzukọ / ụlọ ọrụ MICE), njem (akụkọ ụgbọ elu), gaytourism.travel (Ndị njem LGBT), ụwatourismwire.com (akụkọ banyere ndị njem kacha elu na ndị njem, dịka UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP), njem.com (isi mmalite nke njem nleta, ndi n’agu akwukwo), mmanya. uzo (mmanya na nri nri), na hawaiinews.online (Hawaii akọwapụtara).
eTN dị na Hawaii, USA nwere ọfịs ma ọ bụ nnochite anya na California, Florida, New York, Texas, Australia, Czech Republic, HongKong, Jamaica, Jordan, India, Indonesia, Israel, Italy, Peru, Poland, South Africa, South Korea, Spain, Thailand, Tanzania, Uganda, UAE, Seychelles, Zimbabwe. eTurboNews Germany dị na Duesseldorf na Hamburg. Na mgbakwunye, eTurboNews nwere ndị nnọchianya na ihe karịrị mba 100.
Corpolọ ọrụ ahụ nwekwaara ya TravelMarketingnetwọk, otu ndi ahia ahia ahia di iche iche sitere na ndi oru ndi njem. Netwọk ahụ bụ ndụmọdụ mmekọrịta ọha na eze maka mkpa nke njem na njem njem na-enye teknụzụ nke PR na ndụmọdụ maka ịre ahịa na akara maka ụlọ ọrụ ndị metụtara njem, njem, na azụmaahịa metụtara njem.
eTN bụ onye guzobere na ike dị n'azụ ICTP (The International Coalition of Tourism Partners) na ndi ohuru ohuru Ndị njem nlegharị anya nke Africa.
Juergen Steinmetz, onye isi oche eTN Corporation
Onye mgbasa ozi eTN na onye isi ala Juergen Steinmetz kwuru, sị: “Ruo ọtụtụ afọ, eTN ekpuchila akụkọ na-agbasa banyere Caribbean yana okwu metụtara mpaghara ahụ n'ụzọ zuru ezu. eTN esorola ọtụtụ ihe omume na Caribbean, gụnyere UNWTO Global Conference on Jobs and Inclusive Growth na Jamaica.
“Oge eruola ka anyị na ndị Caribbean Caribbean na-eme njem nleta na-arụkọ ọrụ ma soro ndị otu ha na-arụkọ ọrụ ka ha nwee ike ịnweta netwọkụ anyị buru ibu karị, na ịme mgbanwe na mmepe nke njem nlegharị anya na Caribbean.
"Anyị nwere obi ụtọ isonyere ndị kachasị mma na-anọchite anya ụlọ ọrụ Caribbean Travel and Tourism site na Caribbean Tourism Organisation."
eTurboNews hiwere na 1999 ma bụrụkwa ihe ntụkwasị obi tụkwasịrị obi maka njem njem njem na njem njem ụwa maka afọ 19, na naanị akwụkwọ ebipụtara n'ụwa na-enye ozi njem na njem ụwa niile site na elekere, 24/7. Site na ọgụgụ ya, mmekọrịta ya, na nyocha ya, itinye ya na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta eTurboNews jikọtara ọnụ gụnyere ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ njem njem 230,000, ndị na-edebanye aha email, ndị nta akụkọ 17,000, yana ndị ahịa nde 1.3.
eTurboNews amabeghị maka ọrụ egbugbere ọnụ, mana maka ndị ziri ezi, ndị na-agụ akwụkwọ mkpuchi na-ekpo ọkụ nwere mmasị ịhụ.
eTN dị iche na ọtụtụ ntanetị n'ịntanetị. eTN nkwusa Juergen Steinmetz kwuru:
"Anyị ekweghị na n'efu"akwụ ụgwọ mgbasa ozi”Dị ka usoro iji mee ka ndị ọrụ nchịkọta akụkọ anyị na-arụsi ọrụ ike na-enye mkpuchi efu maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ nkwado.
Anyị nwere ụgwọ anyị ga-akwụ.
Anyị anaghị anabata njem ezinụlọ, ngwa ahịa, ma ọ bụ tiketi ịkwụghachi maka ọha na eze.
Anyị anaghị ekwe anyị nkwa mkpuchi n'okpuru nhọrọ n'efu anyị.
Anyị na-amachi ọdịnaya, iru, ntinye na mgbasa ozi maka nhọrọ mkpuchi na-enweghị n'efu, gụnyere ịtọ ntọala akwụ ụgwọ na isiokwu.
Anyị anaghị atụ anya ka onye ọ bụla, gụnyere ụlọ ọrụ PR na-arụ ọrụ n'efu, NOR enweghị ike anyị.
90% nke ọdịnaya anyị enweghị ebumnuche azụmaahịa ma anyị na - agba ndị na - agụ akwụkwọ ume ka ha mee ka anyị mata mgbawa akụkọ, echiche akụkọ na nchegbu.
10% nke ọdịnaya anyị na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi. Media media na-akwụ ụgwọ bụ ihe dị mkpa maka uto ego na mmata maka njem ọ bụla ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla - na ikpo okwu anyị dịkwa mma maka ndụ ogologo ndụ, nnweta dị ukwuu, ntinye mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze, na ozugbo mmetụta, ma na mpaghara na nke ụwa. Anyị ekwenyeghi na nkwado nke ukwuu na mgbasa ozi n'otu ibe iji mee ihe dị iche. Anyị chọrọ ka ndị na-agụ ya payaa ntị ma mepee isiokwu, ma nwee enweghị nsọpụrụ maka ọnọdụ ahụ.
Anyị hụrụ n'anya ịmepe mmekọrịta azụmahịa na ebe njedebe, ihe omume na ndị metụtara ha ozugbo ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ PR ha.
“N’ịbanye na Caribbean Tourism Organisation anyị nwere olile anya ịwulite mmekọrịta ọhụụ / mmeri, weta ụfọdụ mmemme anyị na mpaghara ahụ, ma mụtakwuo gbasara ezigbo okwu metụtara Caribbean, ma jikọta omume kacha mma na ụzọ ụwa anyị si eche echiche.
“Ana m atụ anya ịga nzukọ na-abịanụ AKWOTKWỌ (State of the Tourism Industry Conference) na Bahamas, Ọktoba 1-5. ”